मन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको एमाले प्रदेश सचिवको आरोप, के भएको थियो मन्त्रालयमा? Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
मन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको एमाले प्रदेश सचिवको आरोप, के भएको थियो मन्त्रालयमा?
धनगढी : आज मङ्गलवार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिने भएपछि नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीले ह्विप जारी गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दियो।
प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न प्रत्येक सांसदका लागी छुट्टाछुट्टै पत्र काट्यो। पत्र बुझाउन प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र रावल नेतृत्वको टोली हिजो सोमवार नै खटियो।
सांसदहरूलाई पत्र बुझाउँदै गएका उनीहरू साँझ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका दीर्घ सोडारीलाई पत्र बुझाउन मन्त्रालय परिसर पुगे। मन्त्रालयमा सोडारीसँग भेट त भयो तर उनले पत्र भने बुझाउन पाएनन्। मन्त्रालयमा हल्लाखल्ला मच्चियो त्यसको केही समय पछि उनी बाहिर निस्के। मन्त्री सोडारीले मन्त्रालयमै हातपात गरेको बताइरहेका छन् भने उता मन्त्री सोडारीले पनि आफूमाथि मन्त्रालयमा आएर रावलले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
प्रदेश सचिव रावलका अनुसार प्रदेश कमिटीले काटेको पत्र बोकेर उनी मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ रहेका सुरक्षा गार्डलाई उनले मन्त्री ज्युँ हुनुहुन्छ भनेर सोधे? सुरक्षाकर्मीहरुले हुनुहुन्छ भन्दै कार्यकक्षमा जान अनुमति दिए। मन्त्री सोडारी कार्यकक्षमै थिए।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन सहितको पत्र बुझाउन नपाउँदै सोेडारी रावलमाथि जाइलागे।
प्रदेश सचिव रावलले मन्त्री सोडारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने बताएका छन्। ‘म माथि दुर्व्यवहार भयो तर अहिले मन्त्रीले गलत प्रचार गरिरहेका छन्,रावलले भने,‘कानुनी परामर्श गरिरहेको छु, आजै उजुरी दिन्छु।’
रावलले मन्त्रालयमा कैद भएको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘मन्त्रालयमा सिसिटिभी छ,उनले भने,‘त्यहाँ हेर्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर आउँछ,यदि मैले दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भए म राजनीतिबाटै संन्यास लिन्छु।’
मन्त्री सोडारीका स्वकीय सचिव ललित बहादुर बोहराले विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रीले रावलमाथि दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गरेका छन्। रावलले नै मन्त्री सोडारी माथि दुर्व्यवहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
सोडारी नेकपा एमाले माधव समूहको तर्फबाट अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भने रावल एमाले प्रदेश सचिव हुन। उनी ओली समूहमा छन् ।
२०७८ जेठ २५ गते १०:५३ मा प्रकाशित